I-Boanning Bayside - I-Airbnb
Busselton, Western Australia, i-Australia
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Robyn And Robert
U-Robyn And Robert Ungumbungazi ovelele
Zithokozise nge-Hamptons yakho ngasethekwini. Indawo yokuhlala yesitudiyo esizimele, uhambo lwemizuzu emi-3 nje ukuya emanzini acwebezelayo e-Geographe Bay, ithrekhi yamabhayisikili (amabhayisikili ayatholakala) kanye ne-Busselton Jetty precinct.
Paka imoto yakho bese uhamba uye enkabeni yedolobha imizuzu emi-5 nje ukuze ujabulele okukhethiwe kwezindawo zokudlela ezinhle, izindawo zokudlela ezinhle nezitolo ezinkulu.
Lena indawo ekahle yokujabulela imicimbi eminingi ebanjelwe e-Busselton ehlanganisa imicimbi yezemidlalo namasiko.
Ukwengezwa kwakamuva kwekhaya lomndeni, leli fulethi le-studio elinamathiselwe kancane lihlinzeka ngendawo yokuhlala yangasese, ehlanzekile engenabala, enesitayela sasebhishi esimnandi kufaka phakathi igumbi lokugezela langasese, ikhishi, ilondolo, izinsiza ze-bbq kanye nezindawo zokupaka ezingaphandle komgwaqo.
Ibhulakufesi elamukelekile lezwekazi elibonisa umkhiqizo wasendaweni lifakiwe.
Imbobo umbhede uyatholakala uma kudingeka ukuze usana luhlale ekamelweni elilodwa nabazali
Ababungazi u-Robyn no-Robert bajabulele okokuzithokozisa kwabo okuningi kwe-Airbnb futhi bazokujabulela ukusiza ukwenza ukuhlala kwakho kukhumbuleke kakhudlwana ngokwabelana ngolwazi lwabo lwendawo kuyilapho behlonipha ubumfihlo bakho.
4.98 · 153 okushiwo abanye
Kungakapheli nemizuzu emi-3 uhamba ngezinyawo ukuya olwandle nendawo enhle nenempilo yaseBusselton Jetty kanye nethenisi, ikhilikithi, izitsha, amakhilokhethi namakilabhu okuntweza. Qhubeka nokuhamba futhi emizuzwini emi-2 futhi uzobe usenkabeni yedolobha kanye nendawo yokudlela.
Indawo enhle kakhulu yokujabulela imicimbi eminingi yaseBusselton kanye nesango eliya esifundeni sewayini saseMargaret River.
Siphinde sibe sendaweni enhle yokuqala yalabo bantu abanomdlandla abathanda ukuqwala izintaba okubandakanya ithrekhi yaseKapa ukuya eKapa kanye nenqwaba yezinyawo eziyindilinga e-Leeuwin-Naturaliste National Park.
Ibungazwe ngu-Robyn And Robert
Sihlala esizeni endlini exhunywe esitudiyo esisanda kwakhiwa futhi siyatholakala ukuze uthole izeluleko nengxoxo uma udinga okuthile. Wamukelekile ukusebenzisa ingadi kanye nezinsiza ze-bbq ngesikhathi sokuhlala kwakho
URobyn And Robert Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Busselton namaphethelo